Gini bu Omni-Channel? Kedu ka o si emetụta ụlọ ahịa ezumike a? | Martech Zone
Afọ isii gara aga, ihe ịma aka kasịnụ nke ịre ahịa n'ịntanetị bụ ike ijikọ, ịhazi, na ijikwa ozi na ntanetị ọ bụla. Dika ọwa ohuru si pụta ma bawanye na ewu ewu, ndị ahịa gbakwunyere ọtụtụ ogbe na ihe ọgbụgba ọkụ na usoro mmepụta ha. Nsonaazụ (nke ka bụ ihe nkịtị), bụ nnukwu mkpọsa na ozi ire ahịa na-akụda akpịrị ọ bụla. Ndaghachi azụ na-aga n'ihu - ya na ndị ahịa na-ewe iwe na-ewepu aha ma zoo site na ụlọ ọrụ ha nwere obi ụtọ karịa ịzụ ahịa.
O di nwute, mmalite nke okwu a omni pụtara niile… na nke ahụ bụ otú ahịa si emeso ọwa. Ọ dị m ka ya bụrụ na anyị edeela okwu ka mma, dịka ịhazi ma ọ bụ mgbasa ozi ọwa na-aga n'ihu. Akpaaka gafee ọwa na-ejikarị ụfọdụ nhazi a, mana anyị anaghị ebuli nkwukọrịta ndị ahụ nke ọma.
Gini bu Omni-Channel?
Omnichannel, nke a na-asụkwa ọwa-mmiri, na-ezo aka na ahụmịhe metụtara na onye ahịa nyere. N'ime ahia, ọwa-mmiri na-ezo aka na ahụmịhe ahịa ahịa dị n'otu n'ogologo (aka ọwa). Kama ịbụ onye ahịa gafere n'ọtụtụ ndị na-ajụ ase, ahụmịhe ahụ bụ nke ahaziri iche na nke ziri ezi ebe a na-atụ anya ịkwụsị aka. Ya mere, mgbasa ozi telivishọn nwere ike ịchụ ndị mmadụ gaa na URL na saịtị ebe onye ahịa nwere ike itinye aka na isiokwu ahụ, ma ọ bụ ikekwe debanye aha maka ịdọ aka ná ntị mkpanaka ma ọ bụ ozi ịntanetị ndị na-aga n'ihu itinye aka. Ahụmịhe ahụ kwesịrị ịbụ nke enweghị nsogbu na nke na-aga n'ihu, kama ịmeghachi ya na iwe.
Omnichannel ma ọ bụ ịzụ ahịa ahịa Omnichannel na-ezo aka na mmekọrịta dị n'etiti ụlọ ahịa na ngwaọrụ dijitalụ, ozi ndị ahịa kesara n'etiti omume na mmekọrịta na ntanetị na ndị na-ere ahịa na mpaghara, yana - n'ezie - ọnụahịa, nnyefe, na ngwaahịa ziri ezi n'etiti ụlọ ahịa na mmekọrịta dijitalụ. Mgbe ihe niile na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu, ọ na-eduga na ahụmịhe ịzụ ahịa ka ukwuu. Nke ahụ na - eduga ire ahịa buru ibu na ịre ahịa n'ọdịnihu n'ọdịnihu maka onye ahịa ọ bụla. N'ezie, ndị na-azụ omnichannel nwere a 30% dị elu karịa ndụ karịa ndị na-azụ ahịa na-eji naanị otu ọwa.
Ka ndị na-azụ ahịa na-aghọwanye ọwa-agnostic, na ọtụtụ ndị omnishannel na njem ndị ahịa ha, ndị na-ere ahịa na-agbasa ma na-emezu ihe ha chọrọ na-achọpụta mbịaghachi kasịnụ n'oge ezumike a ezumike. Ọ bụghịzi banyere brik na ngwa agha vs. e-commerce. Ndị na-ere ahịa na-aga nke ọma taa maara na ha kwesịrị ime njem ndị ahịa ka ọ nwee ahụmịhe na-enweghị ntụpọ n'akụkụ ọwa niile yana ngwaọrụ niile ka ndị ahịa ghara iche na ha ga-ahọrọ. Stuart Lazarọs, VP nke Ahịa maka North America, Ama
Ihe omuma ihe omuma a juputara na uzo mbu na nke ato na ihe ndi ahia ndi mmadu na-acho anya na otu uzo di iche iche si enwe mmetuta na ahia. Ọ na-agụnye stats site na ụdị dịka Amazon, Michael Kors, na Warby Parker iji gosipụta otu ha si agbachitere asọmpi, ma chọpụta isi nsogbu ndị na-ere ahịa na-eche ihu taa. Highlightsfọdụ ihe:
64% nke ndị na-azụ ahịa na ntanetị na-ekwu ọsọ ọsọ dị ka mkpebi ịzụta dị mkpa
90% nke ndị na-azụ ahịa na-echekwa gara na weebụsaịtị ma mechaa zụta nke abụọ ma ọ bụ nke atọ n'ịntanetị
Naanị 36% nke ndị ahịa ga-aga ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na enweghị ozi ngwongwo dị n'ịntanetị
Tags: 2015amazonzụrụ kacha mmanwa ogeKrismasahịa dataEbeledeloitteeyewearezumikeebe obibimwekotamacy simichael korsUzoukwuomni-ọwaomnichannelomnichannel na-ere ahịaomnichannel ahịaretailmgbaàmàWalmartonye na-adọba ọgụ
5 Cloudzọ Cloud dabeere na Order Management Systems na-enyere gị aka ịbịaru ndị ahịa gị nso